Bit By Bit - Running fanandramana - 4.4 Moving mihoatra fanandramana tsotra
Aoka ny hifindra any an-dafin'i fanandramana tsotra. Telo hevitra dia ilaina ho an'ny manan-karena fanandramana: manan-kery, heterogeneity ny fitsaboana vokany, ary ny rafitra.
Mpikaroka izay vaovao ny fanandramana matetika mifantoka amin'ny tena manokana, tery fanontaniana: manao izany fitsaboana "asa"? , Ohatra, no antso an-tariby avy amin'ny mpirotsaka an-tsitrapo mampirisika ny olona hifidy? Ve ny fanovana ny vohikala bokotra avy amin'ny manga ho maitso fitomboana Click-amin'ny alalan'ny tahan'ny? Indrisy anefa, mahamenatra phrasing momba izay "miasa" manamaizina ny hoe saika mifantoka fanandramana tsy tena milaza aminao raha mba misy fitsaboana "miasa" amin'ny ankapobeny. Kosa, saika nifantoka fanandramana mamaly ny fanontaniana manokana kokoa: inona no vokany eo ho eo io fitsaboana manokana amin'ny fampiharana manokana io ho an'ny mponina ny mpandray anjara izany amin'izao fotoana izao? Hiantso aho fanandramana izay mifantoka amin'ny fanontaniana tsotra tery io fanandramana.
Fanandramana tsotra afaka manome fanazavana sarobidy, nefa tsy hamaly fanontaniana maro izay samy manan-danja sy mahaliana toy ny hoe: misy ny olona sasany noho ny fitsaboana izay nanana vokany lehibe kokoa na kely ?; misy fitsaboana hafa izay mety hahomby kokoa ?; ary inona no ifandraisan'ny fanandramana mivelatra kokoa teoria ara-tsosialy?
Mba hampisehoana fa sarobidy ny hifindra any an-dafin'ny fanandramana tsotra, dia aoka ny handinika ny iray amin'ireo toerana tena Analog saha aho fanandramana, ny fanadihadiana nataon'ny P. Wesley Schultz sy mpiara-miasa aminy eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fenitra ara-tsosialy sy ny angovo (Schultz et al. 2007) . Schultz sy ny mpiara-miasa aminy doorhangers nahantona tamin'ny 300 tokantrano ao San Marcos, California, ary ireo hafatra samihafa doorhangers nanolotra natao mba hamporisihana angovo fiarovana. Avy eo, Schultz sy ny mpiara-miasa norefesiny ny vokatry ny hafatra ireo eo amin'ny fandaniana herinaratra, na rehefa afaka indray herinandro sy telo herinandro; jereo Figure 4.3 for Misy tsipiriany momba ny famolavolana ny fanandramana.
Sary 4.3: Schematic ny famolavolana avy Schultz et al. (2007) . Ny saha andrana isika raha tokony ho 300 nitsidika tokantrano ao San Marcos, California in-dimy ny fe-potoana valo herinandro. Ao amin'ny tsirairay tanana mitsidika ny mpikaroka naka famakiana avy any an-trano ny fahefana metatra. Tamin'ny roa ny fitsidihana ny mpikaroka nametraka doorhangers ny trano sasany manome vaovao momba ny angovo fampiasana. Ny fikarohana ny fomba fanontaniana dia ny afa-po ny hafatra ireo no fiantraikany fampiasana angovo.
Ny fanandramana roa fepetra. Tamin'ny toe-javatra voalohany, tokantrano nahazo famonjena angovo ankapobeny soso-kevitra (ohatra, fa tsy ny fampiasana mpankafy rivotra conditioners) sy ny vaovao mikasika ny ankohonany ny fampiasana angovo oharina amin'ny eo ho eo ny fampiasana ny angovo eo amin'ny manodidina. Schultz sy ny mpiara-miasa hoe izany ny famaritana toe-normative satria ny vaovao momba ny angovo amin'ny fampiasana ny manodidina nanome fanazavana momba ny fitondran-tena mahazatra (izany hoe, ny famaritana fenitra). Rehefa Schultz sy mpiara-miasa nijery ny vokatry ny fampiasana angovo ao ity vondrona ity, ny fitsaboana niseho tsy misy vokany, na eo amin'ny fohy ezaka, na ny maharitra; amin'ny teny hafa, ny fitsaboana dia tsy toa ny "asa" (Sary 4.4).
Nefa, soa ihany, Schultz et al. (2007) dia tsy hipetraka ho an'ny fanadihadiana tsotra izany. Talohan'ny ny fanandramana nanomboka niady hevitra izy ireo fa mavesatra mpampiasa ny herinaratra-olona noho ny haratsiam-mety hampihena ny fanjifana, ary izany hazavana izany mpampiasa ny herinaratra-olona ambany ny haratsiam-tena mety hampitombo ny fandaniana. Ary nony nijery ny tahirin-kevitra, izany indrindra no hitany (Sary 4.4). Noho izany, inona no nijery toy ny fitsaboana izay tsy manana vokany dia marina ny fitsaboana izay nanan-janaka roa offsetting vokany. Ny mpikaroka antsoina hoe manohitra ny mamokatra io fitomboana eo amin'ny mazava mpampiasa ny Boomerang vokany.
Sary 4.4: Vokatra avy amin'ny Schultz et al. (2007) . Tontonana voalohany dia mampiseho fa ny famaritana fenitra fitsaboana manana salanisan'ny aotra Tombanana fitsaboana vokany. Na izany aza, ny faharoa dia mampiseho fa tontonana eo ho eo io fitsaboana vokany dia tena ahitana offsetting roa vokatry. Fa be mpampiasa, ny fitsaboana, fa nihena fampiasana ny mazava mpampiasa, ny fitsaboana nitombo fampiasana azy. Farany, ny fahatelo dia mampiseho fa tontonana fitsaboana ny faharoa, izay nampiasa injunctive famaritana sy fitsipika, efa mitovitovy ny vokany mavesatra ihany mpampiasa fa mitigated ny Boomerang vokany eo amin'ny mazava mpampiasa.
Ankoatra izany, Schultz sy ny mpiara-miasa mialoha mety izany, ary amin'ny toe-javatra faharoa dia nalahany ny kely fitsaboana hafa, mazava iray natao mba hanafoanana ny Boomerang vokany. Ny tokantrano ao amin'ny faharoa toe-javatra nahazo ny tena iray ihany fitsaboana-ankapobeny angovo famonjena soso-kevitra sy vaovao mikasika ny ankohonany ny angovo fampiasana raha oharina amin'ny ny manodidina-iray kely koa, fa olona ambany-eo ho eo fandaniana, ny mpikaroka nanampy ny :) sy ny olona ambony-eo ho eo ny fanjifàna izy ireo nanampy ny :(. ireo Emoticons dia natao hanaitra izay ny mpikaroka atao hoe injunctive fenitra. injunctive fenitra manondro ny fomba fijery, izay matetika nankatoavina (ary hankasitrahana) famaritana fenitra kosa manondro ny fomba fijery, izay matetika atao (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .
Amin'ny fampidirana izany emoticon kely iray, ny mpikaroka nampihena be ny Boomerang vokany (Sary 4.4). Araka izany, amin'ny fanaovana izany fiovana tsotra iray-ny fiovana izay atosiky ny iray saro-takarina ara-tsaina ara-tsosialy teoria (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) -dia ny mpikaroka dia afaka miala ny fandaharana iray izay tsy toa ny asany ho ao an iray izay niasa, ary, miaraka, izy ireo dia afaka handray anjara ny fahalalana ankapobeny ny fomba fenitra ara-tsosialy vokany eo amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona.
Tamin'izay fotoana izay, na izany aza, mety tsikaritrao fa misy zavatra dia somary hafa ny momba izany fanandramana. Indrindra indrindra, ny fanandramana ny Schultz sy ny mpiara-miasa aminy no tsy tena manana fanaraha-maso ny vondrona Toy izany koa izay randomized fanandramana atao. Ny fampitahana izany famolavolana sy ny famolavolana ny Restivo sy van de Rijt mampiseho ny fahasamihafana eo amin'ny teti-dratsy roa lehibe ampiasain'ny mpikaroka. Ao anelanelan'ny-lohahevitra teti-dratsy, toy ny Restivo sy van de Rijt, misy fitsaboana vondrona sy ny fanaraha-maso ny vondrona, ary tao anatin'ny-lohahevitra notendren'Andriamanitra ho ny fitondran-tena ny mpandray anjara no ampitahaina taloha sy taorian'ny fitsaboana (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Ao amin'ny foto-kevitra ao anatin'ny-fanandramana izany dia toy ny hoe mpandray anjara tsirairay miasa ho toy ny fanaraha-maso ny vondrona. Ny tanjaky ny teo-foto-kevitra fa teti-dratsy dia manome ny fiarovana an'i confounders (araka izay voalaza teo aloha), ary ny herin'ny foto-kevitra ao anatin'ny-fanandramana dia mitombo fametrahana mazava tsara ao amin'ny vinavina. Rehefa mpandray anjara tsirairay miasa ho toy ny fanaraha-maso, teo anelanelan'i-mpandray anjara fiovaovana no intsony (jereo ny Technical Fanazavana Fanampiny). Mba hanambara ny izay ho avy any aoriana rehefa manolotra torohevitra momba ny fampianarana nomerika fanandramana, misy farany endrika, antsoina hoe samy hafa endrika, izay Mitambatra ny nohatsaraina fametrahana mazava tsara ny teti-dratsy ao anatin'ny-lohahevitra sy ny fiarovana amin'ny mampifangaro ny foto-kevitra eo-teti-dratsy.
Sary 4.5: telo fanandramana teti-dratsy. Standard randomized fanandramana mampiasa foto-kevitra eo-teti-dratsy. Ohatra iray ny teo-foto-kevitra nanaovana dia Restivo sy van de Rijt ny (2012) fanandramana eo amin'ny barnstars sy ny fandraisana anjara amin'ny Wikipedia: mpikaroka tsapaka nizara mpandray anjara ho fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vondrona, nanome mpandray anjara ao amin'ny fitsaboana vondrona iray barnstar, ary nampitaha vokatra ho an'ny roa vondrona. Ny faharoa nanaovana karazana dia ao anatin'ny foto-kevitra famolavolana-. Ny fanandramana roa sy ny mpiara-miasa ao amin'ny Schultz ny (2007) fianarana amin'ny fenitra ara-tsosialy sy ny fampiasana angovo mampiseho ny foto-kevitra ao anatin'ny-famolavolana: mpikaroka nampitaha ny herinaratra fampiasana ny mpandray anjara taloha sy taorian'ny fandraisana ny fitsaboana. Tao anatin'ny-olom-peheziny teti-dratsy manolotra nohatsaraina antontan'isa fametrahana mazava tsara amin'ny alalan'ny fanesorana eo amin'ny foto-kevitra hampifandrafy (jereo ny Technical Fanazavana fanampiny), kanefa izy ireo dia misokatra ho azo atao confounders (ohatra, ny fiovana eo amin'ny toetrandro eo amin'ny mialoha fitsaboana sy ny fitsaboana fe-potoana) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Ao anatin'ny teti-dratsy-foto-kevitra ihany koa indraindray antsoina hoe miverimberina fepetra teti-dratsy. Farany, mifangaro teti-dratsy mitambatra ny nohatsaraina fametrahana mazava tsara ny teti-dratsy ao anatin'ny foto-kevitra sy-ny fiarovana amin'ny mampifangaro ny foto-kevitra eo-teti-dratsy. Ao amin'ny endrika samy hafa, mpikaroka mampitaha ny fiovana eo amin'ny vokatra ho an'ny olona eo amin'ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny vondrona. Raha efa manana mpikaroka mialoha fitsaboana vaovao, toy ny tranga maro nomerika fanandramana, mifangaro teti-dratsy dia tsaratsara kokoa ny teo-foto-kevitra teti-dratsy, noho ny tombony amin'ny fametrahana mazava tsara (jereo ny Technical Fanazavana Fanampiny).
Amin'ny ankapobeny, ny famolavolana sy ny vokatry ny Schultz et al. (2007) mampiseho ny hasarobidin'ny hifindra mihoatra fanandramana tsotra. Soa ihany fa tsy mila ho manam-pahaizana mba hamoronana fanandramana toy izany. Social mpahay siansa mandroso hevitra telo izay hitari-dalana anareo ho amin'ny karena sy famoronana kokoa fanandramana: 1) manan-kery, 2) heterogeneity ny fitsaboana vokatry, ary 3) rafitra. Izany hoe, raha mitandrina ireo hevitra telo ao an-tsaina rehefa ianao no nanaovany ny andrana ianao, dia mazava ho mamorona mahaliana sy mahasoa kokoa ny fanandramana. Mba hanehoana ireo foto-kevitra telo eo amin'ny asa, aho milaza maro ny fanaraha-maso an-tsaha ampahany nomerika fanandramana izay nanao ny tsara tarehy famolavolana sy mampientam-po vokatra any Schultz et al. (2007) . Rehefa ho hitanao, amin'ny alalan'ny endrika tsara kokoa, fampiharana, fanadihadiana, sy ny heviny, ianao koa dia afaka mandroso mihoatra fanandramana tsotra.